Rota zviroto zvako nemeso ako zvakavharwa, asi rarama zviroto zvako nemeso akavhurika. - Anotungamira - Quotes Pedia
Rota hope dzako nemaziso ako akavharwa, asi rarama zviroto zvako nemeso ako akavhurika. - Asingazivikanwe
Kurota ndeimwe yezvikamu zvakakosha zvehupenyu hwedu. Kana munhu akasarota, munhu iyeye ane diki kwazvo chishuwo muhupenyu hwake. Naizvozvo, kuva nevamwe zviroto muhupenyu hwako zvakakoshesa.
Izvo hazvizongokubatsira iwe kuti ubudirire kubudirira muhupenyu, asi zvakare zvinokuita iwe munhu anofarira. Muchiitiko kana iwe usina kurota chaiko muhupenyu hwako, pane mukana mashoma wekuti uchaita kubudirira.
Kunze kwezvo, kurota ndechimwe chinhu chinosimbisa hunhu hwako. Nekudaro, chinhu chakanakisa chaunogona kuita hakusi kurega kurota. Ukangomira kurota, zuva iro richava zuva rekupedzisira rehupenyu hwako.
Nekudaro, iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti kurota chete hakuzokubatsire iwe. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti uri kupa kuzvipira kunodiwa kuti uwane zvinangwa zvako.
Iwe unofanirwa kugadzira chirongwa chakaringana icho chinokubatsira iwe kusvika pane kwauri kuenda. Iwe unofanirwa kushanda zvakanyanya, kana zvisakadaro unogona kukundikana muhupenyu hwako.
Iwe uchaona kuti kune vanhu vazhinji vanongorota vakakura uye votaura makuru. Asi kana iwe uchida kushandura zviroto zvako kuti zvive zvechokwadi, iwe unofanirwa kushanda pachiri. Iwe unofanirwa kuzvigadzirira pachako kuti iwe ugone kuzadzisa chinangwa chako pasina nyaya.
Kunze kweizvozvo kurota kunounza zvakawanda zvakanaka kuhupenyu hwako. Semuenzaniso, iwe unozove wakanyanya kuzvipira kune yako chinangwa. Uye, iwe uchizadzisa zviroto zvako, hunhu hwako hunopupurira runyatso. Kuti uve unonyatsojeka, kukura kwehunhu kuchaitika kwauri.
Naizvozvo, usamborega kurota nezve zvaunoda muhupenyu hwako. Rimwe zuva iwe uchaona kuti wazadzisa chinangwa chako chaunoda. Uye zuva iro richava zuva raunofunga kufunga kurota seimwe ye zvinhu zvakakosha zvakanyanya muhupenyu hwako.
Tenda Mune Zviroto Zvako
Kwakanakisisa Kurudzira Quotes
Kutsiva Zviroto Quotes
Kurota Achibudirira Quotes
Kurota Big Quotes
Nguva Yemberi Yekurota Quotes
Kukurudzira Quotes Maroto
Rarama Hupenyu Quotes
Vhura Yako Yemeso Quotes
Tevera Zviroto Zvako
Quotes Nezve Kuzadzisa Maroto
Quotes Nezve Zviroto Uye Zvinangwa
Quotes Nezve Zvinangwa Uye Zviroto
Hupenyu Hupenyu Quotes
Kutenda kunoita kuti zvinhu zvese zvigoneke. Tariro inoita kuti zvinhu zvese zvishande. Rudo runoita kuti zvinhu zvese zvive zvakanaka. Dai iwe uine zvese zvitatu. - Asingazivikanwe
Kutenda kunoita kuti zvinhu zvese zvigoneke. Tariro inoita kuti zvinhu zvese zvishande. Rudo runoita kuti zvinhu zvese zvive zvakanaka. Dai iwe uine…
Usambofa wakanamatira kune chero munhu kunze kwekunge ivo vanonzwa zvakafanana kune iwe, nekuti rimwe divi tarisiro inogona kukuparadza mupfungwa. - Asingazivikanwe
Usambofa wakanamatira kune chero munhu! Hongu, iwe haugone kuzviziva kusvika uye kunze kwekunge wauya…
Usamirire kuti zvinhu zvive nani. Hupenyu hunogara hwakaoma. Dzidza kufara izvozvi, zvikasadaro unopera nguva. - Asingazivikanwe
Haufanire kumirira kuti zvinhu zvive nani. Ziva kuti hupenyu hunogara hwakaoma, uye haugone…
Tarisa pane wako mufaro, tarisa pane hwako hupenyu, tarisa pane ako maonero. - Asingazivikanwe
Tarisa pane wako mufaro, tarisa pane hwako hupenyu, tarisa pane ako maonero. - Anonymous Related…
Dzimwe nguva iwe unongoda kutarisa pauri, uye ndizvo zvakanaka. - Asingazivikanwe
Dzimwe nguva, zvese zvaunoda kuti uite kuve nechokwadi chekuti unoisa pfungwa dzako pauri. Unofanira ku…
Tinoshandisa makiki kuti tive nechokwadi chokuti tinokupai ruzivo rwakanakisisa pane webhusaiti yedu. Kana iwe uchiramba uchishandisa sendi ino tichafunga kuti iwe unofara nayo.Ok